July 27 bu ihe ngosi nke Xiaomi Redmi Pro | Gam akporosis
Xiaomi kwadoro na Redmi Pro ga-ebido na July 27
Site na netwọkụ mmekọrịta Weibo, ebe a na - ahụkarị ọtụtụ akụkọ sitere na China, Xiaomi ekwenyela na ngwaọrụ ahụ a ga-ekpughere ha na mmemme ha na July 27 Ọ gaghị abụ onye ọzọ karịa Redmi Pro. Ngwaọrụ nke na-abịa dị ka nke ọhụrụ ma na-ewepu mkpuchi nke obi abụọ anyị nwere banyere ohere nke kwụsịrị na Redmi Rịba ama 4 nke ruru na ụbọchị ahụ nke onye nrụpụta China mepụtara n'onwe ya.
Xiaomi ekwela ndị na-akwado ya nkwa na ekwentị a ga-adị ọhụrụ na nkà na ụzụ na nke a emeela ụfọdụ ka ha kwuo na ọ nwere ike ịbụ Redmi Rịba ama 4 mana n'okpuru aha dị iche. Dị ka usoro Redmi bụ etiti dị n'etiti Xiaomi, ọ ka mma na anyị enweghị atụmanya dị elu maka ihe "pro" nwere ike ịpụta na aha maka Redmi a, n'agbanyeghị na uru ego ga-abụ otu n'ime arụmụka kachasị mma. nye gị ihe dị iche.
Ebe ọ bụ na anyị na Redmi Pro na-eje ije, ọ bụghị n'oge dị anya gara aga anyị mụtara na akara abụọ Geekbench pụtara n'okpuru aha Redmi Pro.Anyị abịala ịhụ ihe teaser nwere ngwakọta abụọ bụ, mana ị kwesịrị hapụ nke a na obi abụọ Maka profaịlụ na ekwentị a dị n'onwe ya ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka etiti.
Nkọwa akọwapụtara site na benchmarking bụ: isi ihe nlereanya na Helio X20 mgbawa (MT6797M) mechie na 2 GHz na 3 GB nke RAM na ụdị ọzọ dị iche iche na-agba ọsọ na MediaTek Helio X25 MT6797T processor na ọsọ elekere nke 2.5 GHz na 4 GB nke RAM.
Xiaomi ekwenyela na ihe nke abuo ga-ewepụta ma emesịa ọnwa a ma ọ ga-abụ enyi omimi nke a ga-ahapụ n'otu ụbọchị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi kwadoro na Redmi Pro ga-ebido na July 27
Ọ bụrụ na ndị Redmi bụ ndị dị n'etiti Xiaomi, kedu ndị dị elu?
[APK] Facebook maka gam akporo ugbu a na-enye gị ohere ịchekwa vidiyo iji lelee ha na offline
ZTE ZMax pro bụ onye ọrụ gọọmentị nwere 6 "FHD ihuenyo na batrị 3.400 mAh maka $ 99